कक्षा ११ पनि परीक्षा नहुने, विद्यालयकै मूल्याँकनबाट नतिजा, अनि १२ को ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/कक्षा ११ पनि परीक्षा नहुने, विद्यालयकै मूल्याँकनबाट नतिजा, अनि १२ को ?
काठमाडौं : कोरोना भाईरसका कारण अन्योलमा परेको कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षा पनि विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गरिने भएको छ । केहि समय अगाडी एसइइको नतिजा विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गरिने निर्णय भएको थियो ।
‘परिवेश अनुकूल कुनै पनि माध्यमबाट सिक्नसक्ने गरी सिकाइ निरन्तरताका लागि गरिएको आह्वानअनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यक्रम अघि बढेको छ । यस कार्यक्रममलाई १५ दिनको समीक्षा गरी थप ढाँचाबारे निर्णयमा पुगिनेछ’,
उनले भने, ‘हालको विशिष्ट स्थितिलाई ध्यानमा राखी कक्षा १० र ११ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को आन्तरिक मूल्याङ्कनको तयारी भइरहेको छ र स्थगित कक्षा १२ र उच्च शिक्षाका परीक्षाबारे उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।’
अनिल कपुरकी छोरी सोनम कपुर लण्डनमा भाडा माज्दै गरेको अबस्थामा भेटीएपछी …….